आज असोज ४ गते शनिबार आजको राशिफल वि.सं. २०७६ साल – Complete Nepali News Portal
आज असोज ४ गते शनिबार आजको राशिफल वि.सं. २०७६ साल
ScotNepal September 21, 2019
आजको राशिफल वि.सं. २०७६ असोज ४ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर २१ तारिख. – हरिप्रसाद भण्डारी (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) – ९८४२२१९७३५
आजको राशिफल वि.सं. २०७६ असोज ४ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर २१ तारिख, भाद्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी । रोहिणी नक्षत्र बिहान ०८ बजेर १३ मिनेट सम्म त्यसपछि मृगाशिरा नक्षत्र। चन्द्रमा वृष राशिमा। सिद्धि योग, बालव करण। सुर्याेदय बिहान ०५ः५२ र सुर्यास्त साँझ ०६ः बजे हुनेछ। आज जन्म लिने वच्चाको राशि वृष हुनेछ । आजको चाडपर्र्व सोह्रश्राद्ध अन्तर्गत सप्तमी तिथि श्राद्ध र भोली सोह्रश्राद्ध अन्तर्गत अष्टमी र नवमी तिथि श्राद्ध रहेको छ।
शुभ वेला बिहान ०७ः१३ देखि ०८ः४२ मिनेट सम्म, लाभ वेला दिउँसो ०१ः१३ देखि ०२ः४३ सम्म, शुभ अमृत वेला दिउँसो ०२ः४४ देखि ०४ः४२ सम्म रहेका छन।
काल वेला बिहान ०५ः५७ देखि ०७ः१४ सम्म र रोग वेला बिहान ०८ः४४ देखि १०ः१२ सम्म रहेका छन।
आज तिल मुखमा राखेर र भोली घिउ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुनेछ। यो पञ्चाङ्ग नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित गणना हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्र र राशिमा पनि समय अन्तर हुनेछ । हजुर जुन देशमा भएपनि आफ्नो स्थानीय समय लाई आधार मानी हेर्नुहोला।
आज तपाईका लागि मिश्रित परिणाम प्राप्त हुने दिन छ । वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका सानातिना खुद्रा व्यापारका लागि राम्रो समय छ, तर दूरगामी प्रभावको आर्थिक प्रयोजनका लागि अहिलेको समय सकारात्मक देखिंदैन । दैनिक आम्दानीका मार्गमा बृद्धि हुनेछ, तर मानप्रतिष्ठा र ख्यातिमा आँच आउने सम्भावना छ । सचेत रहनुहोला। विद्यार्थीहरूको घुमघाम र भेटघाटका लागि मन लालायित हुनेछन। व्यापारीहरूका लागि केही हदमा राम्रो छ । सामाजिक काममा जस र सम्मान पाउन कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आज तपाईका लागि शुभरङ्ग घिउ रङ, शुभअङ्क २, शुभदिशा दक्षिण, आज कार्य सफलताका लागि ॐ महालक्ष्म्यै नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आज तपाईका व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन। खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र रमझम तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनु पर्नेछ । गृहिणीहरूको धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्छ । दानपुण्यका क्षेत्रमा लगानी हुनसक्छ । घरपरिवारबाट साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । कामदारहरूलाई कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन। छात्रछात्राले मन दोधार नबनाउनु होला, नत्र तपाईंले लक्ष्यलाई पूर्ण उपयोग गर्न सक्नुहुन्न । स्वास्थ्य अनुकूल हुनेछ । साथीभाई भाई बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्ने योग छ ।
आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सिन्दूरे रातो, शुभअङ्क ९, शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलताका लागि ॐ हं हनुमते नमः मन्त्र १० पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
विदेशयात्राको योजनामा हुनुहुन्छ भने काम थाल्न आजको दिन अनुकूल हुनेछ । बाह्रौं चन्द्रमा भएकाले सानातिना सरसामान हराउन सक्ने वा चोरी हुने सम्भावना छ, सचेतता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । छात्रछात्राले टाढाबाट प्रसन्नता र खुसीको समाचार पाउन सक्ने देखिन्छ । गृहिणीहरूलाई परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ । रकमको कारोबार र लेनदेनमा विवाद आउने सम्भावना छ, यद्यपि आज आर्थिक समस्या हल गर्ने उपाय देखा पर्नेछ । जुवातास र सट्टाबाजीबाट जोगिनु पर्छ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सेतो वा बैजनी, शुभअङ्क ४, शुभदिशा उत्तर आज कार्य सफलताका लागि ॐ चित्रगुप्ताय नमः मन्त्र १९ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आज तपाईको मन फुरुङ्ग हुने दिन छ । आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ । उद्योग तथा व्यापारमा फाइदा हुनेछ । शत्रुहरुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । छात्रछात्राले पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो उन्नति गर्नसक्ने समय छ । राजनैतिक र सामाजिक कार्यकर्ताका लागि पनि अनुकूल समय देखिन्छ । गृहिणीहरूका लागि घरपरिवार र सन्ततिप्रतिको जिम्मेबारी बढ्ने छ । विश्वासको वातावरण बन्नेछ ।
आज तपाईका लागि अल्छीलाग्दो दिन बन्न सक्छ। आज तपाईले धैर्यधारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो । व्यवसायिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ, आम्दानीमा कमी आउने छैन । गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवनमा असमझदारी बढ्ने वा समय दिन नसकिने समय छ । अभिभावकवर्ग, गुरुजन र ठूलाबडासँगको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न सक्छ । पैतृक सम्पत्ति र अचल सम्पत्तिमा विवाद हुनसक्छ । गर्नैपर्ने काममा समेत जाँगर चल्ने छैन। पारिवारिक चाप बढ्नाले काममा बाधा पुग्नसक्छ । बिरोधिहरुको चलखेल बढ्न सक्छ।
आज तपाईका लागि चन्द्रमाको गोचर भाग्यमा चन्द्रमा भएको दिन हो । अध्यात्म र दर्शनप्रति मन आकर्षित बन्न सक्छ । सामाजिक र परोपकारी विचार आउन सक्छ। त्यस्तै प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ । मातापिता, अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । गृहिणीहरूले परिवारभित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिकरसांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । सार्वजनिक हीत र परोपकारका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ । दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुनेछ । कामको दायित्व थपिने सम्भावना छ ।
आज तपाईका लागि शुभरङ्ग सेतो वा पहेंलो, शुभअङ्क ५, शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलताका लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ॐ गुरवे नमः १९ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आज तपाईका लागि अष्टम भावमा चन्द्रमा भएका कारण कतिपय विषयमा मनमा डर पैदा हुन सक्छ। कुनै काम नगरेमा वा अवसरलाई चिन्न नसक्दा पछुतो हुनसक्छ । तपाईंको राशिमा शुभग्रहको बल प्राप्त भएकाले धन, धर्म र भाग्यबलमा अभिबृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्य पक्षमा देखिएको कमजोरी हट्दै जानेछ। सानातिना घरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुनेछ । तपाईंका बानीब्यहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ । आज विषेश गरि बाटो काट्दा वा गाडी हाँक्दा लापरबाही नगर्नु होला ।
आज व्यापार र व्यवसायबाट राम्रो लाभ हुनेछ। तर घरायसी मामिला र प्रेमसम्बन्धका दृष्टिले कमजोर दिन छ । पारिवारिक जीवनमा निरसता आउने सम्भावना छ, त्यसैले परिवारजनका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु र प्रेमजीवनलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ । कामदारले मानप्रतिष्ठा र उन्नतिरप्रगतिका लागि दौडधूप गर्ने दिन छ । अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले काममा सफलता मिल्नेछ । छात्रछात्राका लागि मनोरञ्जन र खेलवाडले कर्मक्षेत्रमा प्रभाव पार्नसक्छ । मौसमी रोगको प्रकोप छ, आहारविहारमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । आम्दानीका दृष्टिले राम्रो दिन रहने देखिन्छ। आज तपाईका लागि शुभरङ्ग गुलाबी वा सिन्दूरे, शुभअङ्क ७, शुभदिशा पश्चिम, आज कार्य सफलताका लागि ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आजको दिन चुनौती का रुपमा देखा परेको छ । सामान्यतया झैझगडा र वादविवादमा फँस्नु राम्रो हुँदैन, मुद्दामामिला र दैनिक काममा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । आफन्त र मित्रवर्गको सहयोग पाइने समय छ । व्यापार र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । रमाइलो र टाढाको यात्राको सम्भावना समेत छ । व्यापार र उद्योगधन्दामा फाइदा छ । छात्रछात्राको मनमा वैदेशिक प्रयोजनको वा लामो दूरीको यात्राको सोच पलाउन सक्छ । घरायसी र प्रेमसम्बन्धमा देखिएका तनाव र समस्याको अन्त्य हुने देखिन्छ। आज तपाईका लागि शुभरङ्ग हलुका सेतो, शुभअङ्क ६, शुभदिशा दक्षिण आजका लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ॐ रां राहवे नमः ०८ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आज सन्ततिका क्रियाकलापमा सामान्य समस्या देखिन सक्छन। उनीहरूका लागि लगानी बढ्न सक्छ । विद्यार्थीहरूलाई पढाईका लागि आत्मबल बढ्ने छ । पठनपाठन र चिन्तनमननमा ध्यान केन्द्रित हुनसक्छ । बौद्धिक, सिर्जनात्मक र चिन्तनमूलक क्रियाकलापमा ध्यान दिने समय आएको छ, व्यवहारिक कारणले दिउँसोसम्म समय निकाल्न गाह्रो भए पनि दिन ढल्दै जाँदा समय अनुकूल हुँदै जानेछ । प्रायः सबैका निमित्त पारिवारिक सहयोग र सद्भावमा कमी आए पनि आफैंले गरेको निर्णय फलदायी हुनेछ । आज जोसँग जतिबेला बोले पनि बडो विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ ।
आज तपाईका लागि शुभरङ्ग हलुका नीलो वा हरियो, शुभअङ्क १, शुभदिशा पूर्व, आज कार्य सफलतका लागि ॐ सरस्वत्यै नमः मन्त्र ०७ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आज चौथो चन्द्रमाको प्रभावले कामधन्दा र प्रयासमा ढिलो गरी सफलता पाउन सकिने छ । गृहिणीहरूले घरगृहस्थीमा धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूले आज घरायसी कुरा सम्झेर दिन बिताउने छन। घरपरिवार स्वास्थ्यमा आकस्मिक ढंगले समस्या आउनसक्छ । छोराछोरीको स्वास्थ्य एवं पढाइप्रति जिम्मेवारी बोध हुनेछ । त्यस्तै पुरानो लेनदेन र ऋणकारोवारका कारण चिन्ता बढ्ने दिन छ। डुबेको धन उकास्न दौडधूप गर्नुपर्छ । साथीभाइको जमघट वा भोजभतेरमा सहभागी बन्नुपर्ने छ।
आज तपाईको शुभरङ्ग रातो वा पहेंलो, शुभअङ्क ४, शुभदिशा उत्तर, आज कार्य सफलताका लागि ॐ नमश्चण्डिकायै नम मन्त्र ११ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।
आज समाजमा सम्मानित र चर्चित व्यक्तिहरूको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । परोपकारी काम र समाजसेवा गर्दा प्रशंसा प्राप्त हुने योग छ । त्यस्तै गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन मन लाग्ने समय छ । आमव्यक्तिले राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय आएको छ । दाजुभाइको सहयोग लिन र दिन सकिने छ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन। व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक रहने छ । आम्दानीमा कमी आउने छैन । अरुको भलाइका लागि दौडधूप गर्नु पर्नेछ । आज तपाईका लागि शुभरङ्ग गाढा नीलो, शुभअङ्क ३, शुभदिशा पश्चिम, आजका लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ॐ सिद्धिविनायकाय नमः मन्त्र ०८ पटक जप गर्नु शुभ हुनेछ।